Akụkọ - Gini kpatara nkpuchi mkpuchi mkpuchi ji abụ mmanụ mmanụ?
Kedu ihe kpatara mkpuchi mkpuchi ji adị mmanụ mmanụ?
A otutu oge ihe engine ihihi bụ-apụghị izere ezere, Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji a ọjọọ mmanụ, E nwere ọtụtụ adịghị na mmanụ, Ọ bụghị nanị na ọ na-amụba iyi na dọkatụrụ adọka na engine,
O nwekwara ike ime ka mmanụ mmanụ gasị.
Ka anyị tụlee maka ụfọdụ mkpọpu mmiri n'ime mkpuchi ụlọ valvụ ahụ.
Kedu ihe na-eme ka ụlọ valvụ ahụ daa? Olee otú obibi ya?
Kedu ihe bụ ihe mkpuchi valve engine?
Igwe ihe mkpuchi valve - nke a maara dị ka mkpuchi ụlọ valve, ọ bụ onye na-emechi akara nke akụkụ nke elu nke injin ahụ. A na-emechi ya na mmanụ engine nke kwekọrọ na pan mmanụ ka mmanụ wee ghara ịpụ apụ mgbe engine ahụ na-agba ọsọ. Isi nke cylinder kwekọrọ na ahụ cylinder ahụ, a na-etinye valvụ kwekọrọ na isi nke isi ahụ, na ahụ cylinder bụ emebere n'ime ụlọ mkpakọ e mechiri emechi, n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ, na-ekwe ka ngwakọta a na-ere ọkụ na-enwu ọkụ n'ime ya. Igwe mkpuchi ime ụlọ nke dị elu, mkpuchi mkpuchi ala, ahụ na-arụ ọrụ nke ala, na sump mmanụ.
Kedu ihe kpatara mkpuchi mkpuchi ji bụrụ mmanụ mmanụ?
1- ka nká nke valvụ na-ekpuchi gasketleads na mmanụ mmanụ.
Nke mbụ, a na-eji akwa gas valve eme ihe ogologo oge, na-eme ka ịka nká ma nwekwaa ike ikpuchi ụcha mmanụ. Egba gasị maka ihe roba, n'ihi ndụ ọrụ ụgbọ ala dị ogologo, ihe roba ga-aka nká, sie ike, na-ebute na mmanụ mmanụ.
Ebe ọ bụ na ọnụ ụlọ valvụ ahụ dị n'akụkụ elu nke injin ahụ, mmanụ ga-agbadata isi isi ala ahụ mgbe mpepụ windo valvụ ahụ na-agbapụ, n'ihi na ahụ injin na-arụ ọrụ
N’ebe dị elu ka elu, mmanụ ịrapara n’elu ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ pụọ, na-emepụta anwụrụ ọkụ.
N'okwu a, mepee mkpuchi ụlọ mkpuchi wee dochie mkpuchi gasị.valve mkpuchi ebe a na-akwụ ụgwọ adịghị elu
2.-A na-egbochi valve ventilashion a na-amanye
PCV valvụ nke crankcase ventilashion usoro na-egbochi, nke na-akpata oké nrụgide n'ime igwe na n'ikpeazụ na-akpata mmanụ leakage n'okpuru pressure.If a kpatara na-adịghị ahụrụ, ọ ga-eme ka ndị ọzọ nsogbu mgbe e mesịrị, dị ka crankshaft mmanụ akara leakage na na .However, ọ dị nnọọ mfe iji chọpụta ma ọ bụ ihe nkwụnye PCV na-arụ ọrụ nke ọma: n'okpuru ọnọdụ enweghị ọrụ, ọnọdụ ọrụ nke PCV valve nwere ike kpebisie ike ozugbo site na iji mkpịsị aka na-anwale agụụ nke oghere crankcase.
Usoro nyocha maka valvụ PCV nke crankcase amanye ventilashion System:
Mee ka injin ahụ ghara ịrụ ọrụ, wepu valvụ PCV site na sookpu nke mkpuchi ahụ, ma lelee ma ọ bụ ihe mkpuchi PCV ahụ egbochila .Ọ bụrụ na ị tinye aka gị na PCV valve nkwonkwo, mkpịsị aka gị ga-enwe mmetụta agụụ.
Inspectionzọ nyocha ọzọ bụ iwepu ọkpọkọ ikuku si na ikuku ikuku mgbe ị wụnye valvụ PCV, ma jiri nwayọ kpuchie crankcase na mpempe akwụkwọ. Mgbe nrụgide dị na crankcase na-ebelata (banyere IMIn), ọ ga-edo anya na a na-adọta mpempe akwụkwọ anụ ahụ na oghere oghere.Ọzọkwa, mgbe ịkwụsị engine ahụ, wepụ valvụ PCV wee jiri aka ya lelee ya. Ọ bụrụ na enwere ụda "pịa", valvụ PCV na-agbanwe ma dị.
3 - 3- Ndabere nke akụkụ ndị ọzọ nke engine ahụ na-eduga na nsị mmanụ.
Ka nkpa nke pistin pistin nke engine na-eduga n'ịtọpu akara. Mgbe injin ahụ na-agba oke ọsọ, ihe a na-ahụ anya nke ọgba aghara na-eme, nke na-eduga na nrụgide ikuku na-ekpocha oke, na n'ọnọdụ ndị dị oke njọ, ọ na-eduga na mmebi nke mkpuchi mkpuchi gasketsealant na mmanụ mmanụ.
Tụkwasị na nke a, n'ihi àgwà mmanụ na-adịghị mma, nchịkọta carbon siri ike nke adhesion pistin, ntinye nke gas valve gasket abụghị ọkọlọtọ, na-akpata ike na-enweghị isi, wdg, nsogbu ndị a niile ga-eduga na mmebi nke mkpuchi mkpuchi gasị na mmanụ mmanụ.
Mmebi nke leakage nke roba mkpuchi gasket
Lezienụ anya maka ihe mkpuchi nke mkpuchi mmanụ mmanụ .Mmebi nke engine ahụ.
Enwere ihe ọghọm dị na nchekwa dịka ọkụ butere site na mmanụ mmanụ na mmanụ mkpuchi.
N'ihi nchapu mmanụ na mkpuchi nke ụlọ valvụ ahụ, ịwụfu mmanụ ga-agbada n'igwe ahụ. N'ihi oke okpomọkụ nke igwe ahụ mgbe injin ahụ na-arụ ọrụ, mmanụ na-arapara n'elu ahụ nke injin ahụ ga-eji nwayọọ nwayọọ pụọ ma mepụta isi ísì ọjọọ. N'ọnọdụ ndị siri ike, mmanụ ahụ ga-abanye n'ụgbọala ya na usoro ikuku ikuku, na-emetụta gburugburu ụgbọ ala.
Nke abuo, mgbe oghere nke mkpuchi na-ekpuchi mmanụ adhesion na igwe na-ekpochapu mmanụ, mmerụ ahụ abụghị nke dị mfe, uto dị nkọ, ụgbọ ala na-agba oke ọsọ n'oge ọkọchị, n'ihi na ọnọdụ okpomọkụ nke ikpochapu igwe dị oke elu, na-akpata nrapado na kpochapu mmanụ na-ekpochapu ọkụ, ọkụ ọkụ ndị ọzọ nwere ike ire ọkụ, nwere ike ibute ọkụ ọkụ ọkụ
Post oge: Jan-19-2021